थिस्सलोनिकीहरूलाई पावलको 1st पत्र – 2माछा
घर / बाइबल / Epistles / थिस्सलोनिकीहरूलाई पावलको 1st पत्र
1 थिस्सलोनिकी 1
1:1 पावल र Sylvanus र तिमोथी, थिस्सलोनिकीहरूलाई को चर्च, परमेश्वर पिताको र प्रभु येशू ख्रीष्टमा.
1:2 तपाईं अनुग्रह र शान्ति. हामी सधैँ को लागि परमेश्वरको धन्यवाद दिन, ceasing बिना हाम्रो प्रार्थना तपाईं को स्मृति राखन,
1:3 विश्वासको आफ्नो काम सम्झनुहुन्छ, र कठिनाइ, र दान, र सामना गरिरहेका आशा, हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमा, परमेश्वरले हाम्रा पिता पहिले.
1:4 हामी थाहा लागि, भाइहरूले, परमेश्वरको प्रिय, आफ्नो निर्वाचन को.
1:5 एक्लै शब्द तपाईं बीचमा हाम्रो सुसमाचारको लागि भएको छैन, तर पनि सद्गुण मा, र पवित्र आत्मामा, र एक ठूलो पूर्णतामा संग, एउटै तरिका तपाईंलाई थाहा रूपमा हामी आफ्नो निम्ति तपाईं बीचमा हुन्थे छन्.
1:6 अनि त, तपाईं हामीलाई प्रभुको र देखासिकी गर्नेहरू भयो, ठूलो कष्ट बीचमा वचन स्वीकार, तर पवित्र आत्माको आनन्द संग.
1:7 त्यसैले तपाईं म्यासिडोनिया र Achaia विश्वास गर्ने सबै को लागि एक नमुना बनेका छन्.
1:8 तपाईं को लागि, प्रभुको वचन फैलाउन थियो, मात्र होइन म्यासिडोनिया र Achaia मा, तर पनि हरेक ठाउँमा. आफ्नो विश्वास, जो परमेश्वरको तिर छ, हामी केहि बारेमा कुरा गर्न आवश्यक छैन भनेर धेरै उन्नत छ.
1:9 अरूलाई स्वीकृति हामी तपाईंलाई बीचमा थियो को प्रकारको हामीलाई बीचमा रिपोर्ट गर्दै लागि, र तपाईं परमेश्वरको मूर्तिहरू बाट परिवर्तित थिए कसरी, जीवित र साँचो परमेश्वरको सेवा गर्न,
1:10 र स्वर्गबाट ​​आफ्नो छोराको प्रतीक्षा गर्न (जसलाई उहाँले मरेका देखि खडा), येशूले, जसले हामीलाई आउँदै क्रोधबाट उद्धार गरेको छ.
1 थिस्सलोनिकी 2
2:1 तपाईं को लागि आफूलाई थाहा, भाइहरूले, तपाईं बीचमा हाम्रो स्वीकृति खाली थिएन कि.
2:2 बरु, पहिले भोगे भएको र shamefully उपचार गरिएको, तपाईलाई पनि थाँहा छ, फिलिप्पी मा, हामी हाम्रो परमेश्वर विश्वास थियो, धेरै अनुरोध तपाईंलाई परमेश्वरको सुसमाचारको बोल्न ताकि.
2:3 हाम्रो सल्लाह त्रुटि थिएन लागि, न त impurity देखि, न त छल.
2:4 तर, हामी परमेश्वरले परीक्षण गरिएको छ जस्तै, सुसमाचारको हामीलाई सुम्पिएको थियो भनेर, त्यसैले पनि हामी बोल्न गरे, छैन मानिसहरू खुसी पार्न, बरु परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउन, जो हाम्रो हृदय परीक्षण.
2:5 र न हामी गरे, कुनै पनि समयमा, बोलीमा चापलूसी बन्न, तपाईलाई पनि थाँहा छ, न त हामी avarice लागि मौका खोज्न गर्नुभयो, साक्षी परमेश्वर हुनुहुन्छ रूपमा.
2:6 न त हामी मानिसहरूको महिमा खोज्न गर्नुभयो, न तिमी देखि, अरूबाट न त.
2:7 र हुनत हामी तपाईंलाई एउटा बोझ भएको सक्छ, ख्रीष्टको प्रेषित रूपमा, बरु हामी आफ्नो बीचमा साना जस्तै भयो, एक नर्स जस्तै उनको बच्चाहरु स्याहार.
2:8 त्यसैले इच्छुक हामी तपाईंलाई हात गर्न इच्छुक थिए कि तपाईं को लागि हामी थिए, परमेश्वरको मात्र सुसमाचारको छैन, तर पनि हाम्रो आफ्नै प्राण. लागि तपाईंले हामीलाई सबैभन्दा प्यारो भएका छन्.
2:9 तपाईं सम्झना लागि, भाइहरूले, हाम्रो कठिनाइ र weariness. हामी तपाईंलाई बीचमा परमेश्वरको सुसमाचारको प्रचार, काम रात र दिन, हामी तपाईंलाई कुनै पनि गर्न कडा हुनेछ भनेर छैन.
2:10 तपाईं साक्षी, परमेश्वर हुनुहुन्छ रूपमा, को कसरी पवित्र र बस र निर्दोष हामी विश्वास छ जसले तपाईंलाई थिए.
2:11 र तपाईं तरिका थाहा, हरेकले संग, तिनका छोराहरूलाई एउटा बुबा जस्तै,
2:12 जसमा हामी तपाईंसँग pleading र सांत्वना थिए, असर साक्षी, तपाईं परमेश्वरको योग्य एक तरिका हिंड्न थियो भनेर, जो आफ्नो राज्य र महिमा मा तपाईं भनिन्छ छ.
2:13 यस कारण लागि, हामी ceasing बिना परमेश्वरको धन्यवाद दिन: किनभने, तपाईं हामीलाई बाट परमेश्वरको सुनुवाइ वचन स्वीकार गरेका थिए जब, तपाईं मानिसहरूको शब्द रूपमा यसलाई स्वीकार, तर (रूपमा साँच्चै छ) परमेश्वरको वचन रूपमा, तपाईंलाई जसले काम गरिरहेको छ विश्वास गर्ने.
2:14 तिम्रो लागि, भाइहरूले, जो यहूदियामा छन् परमेश्वरको चर्च देखासिकी छ, ख्रीष्ट येशूमा. तिम्रो लागि, पनि, तिनीहरूले यहूदीहरूको भोगे छ रूपमा आफ्नो सँगी countrymen देखि नै कुरा भोगे छ,
2:15 जो पनि प्रभु येशू दुवै जनाको मृत्यु, र भविष्यवक्ताहरूलाई, र हामीलाई गर्ने खेदो गरेका छन्. तर तिनीहरूले परमेश्वरलाई प्रसन्न छैन, र त्यसैले तिनीहरू सबै मानिसहरूलाई विरोधीहरू छन्.
2:16 तिनीहरूले हामीलाई अन्यजातिहरूको कुरा गर्न निषेध, तिनीहरूले मुक्ति हुन सक्छ कि त, र यसरी तिनीहरूले निरन्तर आफ्नै पापको थप्न गर्छन्. तर परमेश्वरको क्रोध धेरै अन्त तिनीहरूलाई लाग्नेछन् हुनेछ.
2:17 हामी र, भाइहरूले, छोटो समयको लागि तपाईं को deprived गरिएको होने, दृष्टि मा, तर हृदयमा, आफ्नो अनुहार हेर्न सबै थप hurried छ, ठूलो इच्छा संग.
2:18 हामी तपाईंलाई आउन चाहन्थे लागि, (साँच्चै, म, पावलले, त्यसैले एक पटक गर्न प्रयास, र, फेरि,) तर शैतानले हामीलाई impeded.
2:19 हाम्रो आशा के छ, र हाम्रो आनन्द, र महिमा हाम्रो मुकुट? यो तपाईं छ, आफ्नो फिर्ती हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको अघि?
2:20 तपाईं हाम्रो महिमा र आनन्द हो को लागि.
3:1 किनभने यो, अब प्रतीक्षा गर्न इच्छुक, यो एथेन्स मा रहन हामीलाई खुसी, एक्लै.
3:2 र हामी तिमोथी पठाइएको, हाम्रो भाइ र ख्रीष्टको सुसमाचार परमेश्वरको सेवकको, तपाईं पुष्टि गर्न र सल्लाह दिन्छ गर्न, आफ्नो विश्वास तर्फबाट,
3:3 त्यसैले कुनै एक यी सङ्कष्ट समयमा विचलित हुनेछ. तपाईं को लागि आफूलाई हामी यो नियुक्त गरिएको छ भनेर थाह.
3:4 हामी तपाईंलाई थिए गर्दा पनि लागि, हामी सङ्कष्ट ग्रस्त भनेर तपाईं भविष्यवाणी, पनि रूपमा भएको छ, र तपाईंलाई थाहा रूपमा.
3:5 यस कारण लागि, म कुनै पनि अब प्रतिक्षा गर्न इच्छुक थिएन, र म तपाईंको विश्वास बारेमा पत्ता लगाउन पठाईएको, सायद नत्र उहाँले जसले तपाईंलाई परीक्षा हुन सक्छ लोभ्याउँछ, र हाम्रो श्रम व्यर्थमा हुन सक्छन्.
3:6 तर त्यसपछि, तिमोथी तपाईं हामीलाई गर्न आएपछि, उहाँले हामीलाई आफ्नो विश्वास र दान रिपोर्ट, र तपाईं हामीलाई सधैं राम्रो सम्झनामा राख्न, हामीलाई हेर्न इच्छा, हामी पनि त्यसै गरी हेर्न चाहन्छन् जस्तै.
3:7 फलस्वरूप, हामी तपाईंलाई सान्त्वना थिए, भाइहरूले, हाम्रा सबै कठिनाइ र सङ्कष्ट बीचमा, आफ्नो विश्वास मार्फत.
3:8 हामी अब त बाँच्न लागि प्रभुमा दृढ सक्छ.
3:9 के को लागि धन्यवाद हामी किनभने तपाईं को परमेश्वरको चुक्ता गर्न सक्षम हुनेछ, सबै आनन्द लागि जो संग हामी हाम्रो परमेश्वरको सामु तपाईं रमाउनुहोस्?
3:10 रात र दिन को लागि, अझ प्रशस्त मात्रामा, हामी आफ्नो अनुहार देख्न सक्नुहुन्छ भन्ने प्रार्थना गर्दै, र हामी आफ्नो विश्वास घटी छन् ती कुराहरू पूरा गर्न सक्छ भन्ने.
3:11 तर सक्छन् परमेश्वरले हाम्रो पिता आफैले, र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको, तपाईं हाम्रो बाटो निर्देशन.
3:12 अनि प्रभु तपाईं गुणन सक्छ, र तपाईं एक अर्को तिर र सबै तिर आफ्नो दान मा प्रशस्त बनाउन, हामी पनि तपाईं तिर के जस्तै,
3:13 दोष बिना आफ्नो हृदय पुष्टि गर्न, शुद्धि मा, परमेश्वरले हाम्रा पिता पहिले, हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको फिर्ती निम्ति, सबै आफ्नो सन्तहरूलाई संग. Amen.
1 थिस्सलोनिकी 4
4:1 त्यसैले, अन्य कुराहरूको, भाइहरूले, हामी सोध्न र तपाईं माग्छु, प्रभु येशूको, कि, तपाईं हामीलाई देखि बाटो पाएका छन् जस्तै जसमा तपाईं हिंड्न र परमेश्वरको खुसी गर्नुपर्छ, त्यसैले पनि हिंड्न सक्छ, क्रम मा तपाईं सबै अधिक प्रशस्त सक्छ कि.
4:2 तपाईं के आदेशहरू थाहा लागि म प्रभु येशू तपाईंलाई दिइएको छ.
4:3 यो परमेश्वरको इच्छा छ, तपाईंको पवित्रीकरण: तपाईं व्यभिचार छुँदै नछुने गर्नुपर्छ भनेर,
4:4 कि हरेकले कसरी पवित्रीकरण र सम्मान आफ्नो पोत अधिकार गर्न जान्नुपर्छ,
4:5 कामवासना को नापसंद छैन, परमेश्वरको थाहा नगर्ने अन्यजातिहरूको जस्तै,
4:6 र कुनै एक overwhelm वा व्यवसाय मा आफ्नो भाइ circumvent गर्नुपर्छ भनेर. प्रभु लागि यी सबै कुराको vindicator छ, हामीले प्रचार र तपाईं testified छन् जस्तै.
4:7 परमेश्वरको लागि impurity हामीलाई भनिन्छ छैन, तर पवित्रीकरण गर्न.
4:8 अनि त, जसले यी शिक्षाहरू despises, मानिस नाइँनास्ति गर्दैन, तर परमेश्वरले, जसले हामीलाई भित्र आफ्नो पवित्र आत्मा पनि प्रदान गरेको छ.
4:9 तर भाइचाराको को दान विषयमा, हामी तपाईंलाई लेख्न कुनै आवश्यकता छ. तिमीहरू परमेश्वरको सिक्नुभयो लागि भनेर एकअर्कालाई प्रेम गर्नुपर्छ.
4:10 साँच्चै लागि, तपाईं म्यासेडोनिया सबै सबै भाइहरूलाई यो तरिकामा व्यवहार. तर हामी तपाईंलाई आवेदन, भाइहरूले, तपाईंले सबै थप प्रशस्त ताकि,
4:11 भनेर tranquil हुन अनुमति दिन्छ काम चयन गर्न, र तपाईंको व्यापार पूरा गर्न र आफ्नो हातले आफ्नो काम गर्न, हामी तपाईंलाई निर्देशन गरेझैं,
4:12 र बाहिर हुनेहरू संग इमानदार हिंड्न, र केही अन्य सम्बन्धित इच्छा.
4:13 र हामी तपाईंलाई नजान्ने हुन चाहँदैनन्, भाइहरूले, ती विषयमा जो सुतिरहेको छन्, ताकि उदास हुन छैन, आशा छ नगर्ने यी अरूलाई जस्तै.
4:14 हामी येशूको मृत्यु र फेरि पुगेको छ भनेर विश्वास भने लागि, त्यसैले पनि परमेश्वरले येशूलाई उहाँलाई सो गर्नेहरूलाई साथ फिर्ता ल्याउने.
4:15 लागि हामी तपाईंलाई यो भन्न, प्रभुको वचन: हामी जो जीवित छन् कि, जो प्रभुको फिर्ती सम्म रहने, सुतेका भएकाहरूलाई लिनुअघि छैन.
4:16 प्रभु आफूलाई लागि, आदेश संग र एक प्रधान दूत को आवाज र परमेश्वरको तुरहीको आवाज संग, स्वर्गबाट ​​धमकना पर्छ. र मरेका, जो ख्रीष्टमा छौं, पहिलो खडा गर्नेछु.
4:17 अर्को, जीवित छन् जो हामी, जो बाँकी छन्, माथि हावा मा ख्रीष्टको भेट्न बादल तिनीहरूलाई छिटो सँगै लिएको गरिनेछ. र यसरी, हामी सधैं प्रभुको साथमा हुनेछ.
4:18 त्यसैले, कन्सोल एक यी शब्दहरू अर्को.
1 थिस्सलोनिकी 5
5:1 तर मिति र समय विषयमा, भाइहरूले, के तपाईं लेख्न हामीलाई आवश्यक छैन.
5:2 तपाईं को लागि आफूलाई राम्ररी प्रभुको दिन रात चोर जस्तै धेरै आइपुग्छन् पर्छ भनेर बुझ्न.
5:3 तिनीहरूले भन्नेछन् जब लागि, "शान्ति र सुरक्षा!"त्यसपछि विनाश अचानक तिनीहरूलाई overwhelm हुनेछ, बच्चा संग एक महिला को श्रम दुखाइ जस्तै, र तिनीहरूले उम्कन छैन.
5:4 तर तिमी, भाइहरूले, अन्धकार छैनन्, तपाईं चोर द्वारा रूपमा दिन overtaken हुनेछ भनेर.
5:5 तपाईं को लागि प्रकाश को छोरा र दिन को छोराहरू छन्; हामी nighttime को छैन, न त अन्धकारको.
5:6 त्यसैले, हामीलाई सुत्न गरौं, बाँकी रूपमा के. बरु, हामी सचेत र सचेत हुनुपर्छ.
5:7 जो सो गर्नेहरूका लागि, रात मा सुत्न; र ती जो inebriated छन्, रात मा inebriated छन्.
5:8 तर हामि, जो डेलाईट को हो, सचेत हुनुपर्छ, विश्वासको छातीको पाता संग र दान र भएको ढाकिएको भइरहेको, एक टोप रूपमा, मुक्तिको आशा.
5:9 परमेश्वरको क्रोध लागि हामीलाई नियुक्त छैन, तर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमार्फत उद्धारको अधिग्रहण लागि,
5:10 जो हाम्रो लागि मृत्यु, ताकि, हामी हेर्न चाहे, वा हामी सुत्न कि, हामी उसलाई संघ बस्न सक्छ.
5:11 किनभने यो, कन्सोल एक अर्को र एक अर्को निर्माण अप, बस रूपमा गरिरहेका छन्.
5:12 र हामी तपाईंलाई सोध्न, भाइहरूले, तपाईं बीचमा ती जो श्रम पहिचान गर्न, र कसले प्रभु तपाईं भन्दा preside, र तपाईं जो admonish,
5:13 तपाईं दान को एक प्रशस्त तिनीहरूलाई विचार हुन सक्छ भनेर, आफ्नो काम खातिर. तिनीहरूलाई शान्ति हुन.
5:14 र हामी तपाईंलाई सोध्न, भाइहरूले: यस बाध्यात्मक ठीक, को कमजोर झुकाव सांत्वना, बिरामी समर्थन, सबैको साथ रोगी हुन.
5:15 कुनै एक कुनै दुष्ट लागि दुष्ट repays कि यसलाई हेर्न. बरु, सधैं जे राम्रो छ पछि लाग्न, एक अर्को र सबै संग.
5:16 सधैं आनन्दित.
5:17 ceasing बिना प्रार्थना.
5:18 सबै मा धन्यवाद दिन. यस को लागि तपाईं सबै को लागि ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरको इच्छा छ.
5:19 आत्मा बुझाने गर्न छनौट छैन.
5:20 भविष्यवाणीहरू spurn छैन.
5:21 तर सबै कुरा परीक्षण. जो राम्रो छ समात्नुहोस्.
5:22 दुष्ट हरेक प्रकारको छुँदै नछुने.
5:23 र शान्ति परमेश्वर आफैले तपाईं सबै कुराहरू मार्फत पवित्र सक्छ, हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको फिर्ती निम्ति दोष बिना भनेर आफ्नो सारा आत्मा र प्राण र शरीर संरक्षित हुन सक्छ.
5:24 तपाईं भनिन्छ छ जसले वफादार छ. उहाँले अहिले पनि कार्य गर्नेछ.
5:25 भाइहरूलाई, हाम्रो लागि प्रार्थना.
5:26 पवित्र चुम्बनले सबै भाइहरूलाई अभिवादन.
5:27 म बाँध्न, प्रभु मार्फत, यो epistle सबै पवित्र भाइहरूलाई पढ्न छ.
5:28 हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह तपाईं संग हुन सक्छ. Amen.